Vehivavy sy Miralenta · Febroary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy sy Miralenta · Febroary, 2013
Tantara mikasika ny Vehivavy sy Miralenta tamin'ny Febroary, 2013
Karaiba24 Febroary 2013
Afganistana20 Febroary 2013
Azia Atsinanana19 Febroary 2013
Nosamborina ilay mpaka sary lamaody antsoina hoe Leslie Kee noho ny famarotana sary mamoafady tamin'ny fampirantiana nataony farany teo tao Tokyo. Fa fanehoana talenta ve ny sanganasany sa fanehoana fahavetavetana? Ao anatin'ity lahatsoratra ity isika dia mahita ny fisian'ny lalàna izay 'manamavo' ny fanehoana ny talenta ao Japana.
Aostralia: Mitaky Ny Zo Amin'ny Fampinonona Zaza Eny Imasom-bahoaka Ireo Mpomba Ny Fampinonoan-dreny
Oseania08 Febroary 2013
Any Aostralia, naka ireo filazam-baovao sy ny arabe ireo mpomba ny fampinonoan-dreny mba hiarovana ny zo fahafahana mampinono ny zaza eny imasom-bahoaka. Fihetsiketsehana indroa miantaona no natao taorian'ny fandroahana an-dRamatoa Liana Webster, reny iray nampinono taminà toerana misy dobo filomanosana ho an'ny daholobe, ny 12 Janoary 2013.
Amerika Latina01 Febroary 2013